တေးရေး/တေးဆို ဒီနွေဦး ရေးစပ်သီဆိုထားသော “မဆိုင်သလိုနေတဲ့ မင်းတို့တွေအတွက် သီချင်… – PVTV Myanmar
တေးရေး/တေးဆို ဒီနွေဦး ရေးစပ်သီဆိုထားသော “မဆိုင်သလိုနေတဲ့ မင်းတို့တွေအတွက် သီချင်…
တေးရေး/တေးဆို ဒီနွေဦး ရေးစပ်သီဆိုထားသော “မဆိုင်သလိုနေတဲ့ မင်းတို့တွေအတွက် သီချင်း” ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 10K Share – 1868
2021-06-28 at 7:51 PM
အံကြိတ် နေမယ် ခဏတော့ တော်လှန်ရေးအောင်ကိုပေါင်ရမည်
Nandar Soe says:
2021-06-28 at 8:20 PM
မဆိုင်သလို နေနိုင်သူတွေ 😥😥😥😭😭😭
2021-06-28 at 9:34 PM
2021-06-28 at 9:55 PM
ရင်နာ စရာ တစ်သက်တာ
ဒုက္ခပေါင်းစုံ ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူကို
2021-06-29 at 7:58 AM
Chit May says:
2021-06-29 at 9:37 AM
2021-06-29 at 10:47 AM
Thein Htwe says:
2021-06-29 at 12:21 PM
Yee Yeewin says:
2021-06-29 at 2:19 PM
Philip Phyo Ko Ko says:
2021-06-29 at 2:59 PM
2021-06-29 at 3:10 PM
2021-06-29 at 3:59 PM
Dennis Arevalo Briones says:
2021-06-29 at 8:13 PM
My prayers to all the Myanmar citizens seeking to end the regime. We are with you spiritually. Love from Philippines.
2021-06-29 at 9:02 PM
Lon Ma says:
2021-06-30 at 3:13 PM
2021-06-30 at 10:25 PM
2021-07-01 at 8:06 PM
2021-07-01 at 8:54 PM
2021-07-02 at 1:19 PM
Aung Phyo San New says:
2021-07-21 at 10:47 PM
Aung San Phyo New
Aung Phyo San New
ဘယ်လောက်ပဲ Report ထုခံရထုခံရ
လမ်းမပေါ်မထွက်ရသေးတဲ့အချိန်တွေမှာ ရင်ထဲက ဗလောင်ဆူတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ဒီနေရာကနေ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ် ညီအကိုတွေနဲ့ ဝေမျှနေမယ်။
စစ်ခွေးဘက်က လော်ဘီတွေလို အရိုးကိုက်ရမှ လုပ်မည့်သူတွေမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့အားလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် ကိုယ်စရိတ်နဲ့ကိုယ် ပြည်သူတွေကို လမ်းမှန်လျှောက်နိုင်အောင် လမ်းပြနေမယ့်သူတွေ ဖြစ်ရမယ်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ရင်လည်း ငါ့ရဲ့ professional အလုပ်ကို ငါ ဆက်လုပ်နေမှာပဲ
2021-08-26 at 7:40 PM
စစ်ကျွန်ပညာရေးကို သပိတ်မှောက်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ ပညာသင်ယူ…